LA OGAADAY: Waxyaabihii Looga Hadlay Shirkii Deg Dega Ahaa Ee Dhex Maray Lionel Messi, Javier Mascherano Iyo Jorge Sampaoli Oo Banaanka La Soo Dhigay Sidii Ay Xaaladu Ahayd Oo La Ogaaday. - GOOL24.NET
LA OGAADAY: Waxyaabihii Looga Hadlay Shirkii Deg Dega Ahaa Ee Dhex Maray Lionel Messi, Javier Mascherano Iyo Jorge Sampaoli Oo Banaanka La Soo Dhigay Sidii Ay Xaaladu Ahayd Oo La Ogaaday.
July 21, 2018 Mahamoud Batalaale
Xulka qaranka Argentina ayaa ka mid ahaa xulalkii waa waynaa ee niyadjabka kala soo laabtay koobka aduunka kadib markii ay waqti aad u adag ku soo qaateen Russia. Xulk Argentina ayaa si dhib badan ugu soo baxay koobkii aduunka ee Russia 2018 isaga oo Lionel Messi saddexley goolal ah ku soo saaray kulankii ugu danbeeyay ee isreeb reebka balse waxay Russia yimaadeen iyaga oo aan kalsooni badan haysan.
Kulankii ugu horeeyay ee koobka aduunka waxay barbaro niyadjab leh la galeen Iceland halka kulankii labaad ay guuldaro 3-0 ahi ka soo gaadhay Croatia waxayna markaas Lionel Messi iyo Javier Mascherano dalbadeen kulan deg deg ah oo ay la galaan Jorge Sampaoli.
Laakiin intii hore wax badan lagama ogayn waxyaabihii kulankaas looga hadlay, sababtoo dhabta ahayd ee ka danbaysay iyo waliba go’aanadii lagu kala qaatay laakiin wariyaha ree Argentina ee Ariel Senosiain oo ka hawl galaya TyC Sports iyo wargayska Ole ayaa buug cusub oo uu qoray arintan ku faah faahiyay.
Wariyaha ree Argentina ee Ariel Senosiain ayaa qoray buug uu ugu magac daray Mundial es Historias waxaana ka mid ah waxyaabihii uu kaga hadlay wixii dhex maray Lionel Messi, Javier Mascherano iyo waliba Jorge Sampaoli.
Ariel Senosiain ayaa shaaciyay in Lionel Messi iyo Mascherano ay dalbadeen kulan deg deg ah markii ay xulkooda ceebtu ka soo gaadhay Croatia waxayna u yeedheen Jorge Sampaoli iyo labadiisii caawiye Sebastian Beccacece iyo Lionel Scaloni.
Wuxuuna wariyaha ree Argentina ee Ariel Senosiain uu sheegay in ujeedada kulankani ahayd in Messi iyo Mascherano ay Sampaoli u sheegaan in ayna gabi ahaanba kooxdu isaga ku kalsoonin kadib wixi ay kala kulmeen Croatia.
Ariel Senosiain oo hadalkii Messi iyo Mascherano u sheegeen Sampaoli soo qaadanaya ayaa yidhi: ” Anagu maanu arag wixii aad sheegtay, intaas wax ka badan anagu kuma aaminsanin adiga isla markaana waxaanu doonaynaa in aanu fikradayada lahaano”.
Arintan ayaa Sampaoli layaab ku noqotay wuxuuna waydiiyay xidiga xulkiisa waxa ay fikrada ay doonayaan tahay waxayna ugu jawaabeen : “Wax walba” oo ah in ay iyagu ismaamulaan taas oo cadayn u ah muuqaalkii kulankii Nigeria ee la sheegay in Sampaoli uu Messi waydiinayay xidiga uu soo galinayay ciyaarta.
Wuxuuna Messi yidhi: “Toban jeer ayaad i waydiisay ciyaartoyda aan doonayo in ay garoonka ku jiraan iyo kuwa aanan doonayn isla markaana waligay anigu magac kumaan siin”. Wuxuuna hadalkani meesha ka saaray in Messi uu shaxda Argentina soo xulanayay intii ka horaysay kulankii Argentina guusha ka gaadhay Nigeria markaas oo ay ciyaartoydu doorteen in fikradooda la tixgaliyo.
Waxaana kulankan goob joog u ahaa madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Argentina ee Claudio Tapia kaas oo sii ogaa in ciyaartoydu ay Sampaoli ka dalbanayaan in masuuliyada uu iyaga siiyo laakiin xaalada shirkan deg dega ahaa oo si kulul ku bilawday ayaa markii danbe la dajiyay waxaana Sampaoli loo sheegay in uu ciyaartoyda dhegaysto oo aanu niyadjab ku ridin.
Markii uu shirku soo dhamaaday Sebastian Beccacece oo ahaa caawiyaha Sampaoli ayaa isku dayay in uu shaqada iska casilo laakiin Jorge Sampaoli ayaa ka horjoogsaday. Si kastaba ha ahaatee, xidhiidhka kubbada cagta Argentina ayaa markale u hawl gali doona in ay tababare cusub u magacaabaan xulkooda.